पूर्ण रुपमा यौन सन्तुष्टि कसरी लिने ? :: :: Hello NEPAL KOREA dot com :: मुख्य पृष्ठ
मुख्य पृष्ठ विविध जानकारी
पूर्ण रुपमा यौन सन्तुष्टि कसरी लिने ? यदि तपाईको यौन साथीले पूर्ण रुपमा यौन आनन्द प्राप्त गरेको कुरामा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्न भने सोच्नुस् माया छ भन्दैमा तपाई उसको मनको सबैकुरा पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने छैन । यद्यपी माया छ भने उसको शरीर र उसको सोचाइ कसरी आनन्दीत हुन्छ भन्ने कुरा केही हदसम्म थाहा हुन सक्छ । तपाई आफ्नो यौन साथीलाई यौनसम्पर्कको लागि पूर्ण रुपमा तयार चाहानुहुन्छ भने तपाईले चुम्बनको स्पर्शबाट शुरुवात गर्नुस् । तपाई सोझै यौनाङ्गतिर आकर्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुराको महसुस नगराउनुस् । प्रेमस्पर्श पाखुरा, पछाडिको भाग हुँदै खुट्टातिर पनि हल्का र मुलायम भुवाको जस्तो स्पर्श गर्नुस् । अनुहार, ओठ, कान, घाँटीमा चुम्बन गर्दै जानुस् । जब तपाई र तपाईको यौन साथी दुवैजनाको अङ्गप्रत्यङ्ग पूर्ण रुपमा सक्रिय भएको अनुभव गर्नुहुन्छ तब तपाई पूर्ण रुपमा योनाङ्गतर्फ प्रवेश गर्नुस् । छातीमा, पछाडिको अङ्गमा, तिघ्रामा, भित्री तिघ्रामा सपर्श बढाउँदै जानुस् । योनीको बाहिरी भागमा लिङ्गले धक्का दिनुस् र फेरि बाहिर निकाल्नुस् । यस अवस्थासम्म पुरुष पूर्ण रुपमा उत्तेजनामा आइपुगेको हुन्छ । र अब बिस्तारै यौनसम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुस् । एजेन्सी प्रतिक्रियाहरु [Total2Comments] santosh dhital wrote on 19 October, 2012 kt haru imotionma aaaayko kasaree thapaunya plz bataidinousna ra kt lai imotion ma launa k garna parla plz garko namankana bataidinous la.THANK U
pragati rai wrote on 05 November, 2012 aaraassumnida.......
का थप शिर्षकहरु • सामसङको फाइभ–जी नेटवर्क आउँदै, सेकेन्डमै मुभि डाउनलोड गर्न सकिने• ग्यालेक्सी एस फोरको जान्नुपर्ने १० कुरा • कुन वेबसाइट कति छिटो खुल्छ चेक गर्ने कि ?• शरिरबाट कपडा हटाउने एप • मोबाइलमा कामसूत्र थ्रीडी • गंगनम स्टाइल’को नयाँ गीत (भिडियो सहित)• मोबाइल चार्ज गर्ने झोला• सामसुङले बनाउँदैछ स्मार्ट वाच • यस्तो छ ग्यलाक्सी एस फोर (भिडियो सहित)• कस्ता छन् त वाइफाइ क्यामेरा• सामसङले ५.९ इन्चको स्मार्टफोन बजारमा ल्याउने• सेक्ससम्बन्धी सामग्री खोजी गर्नेमा नेपाल दसौं स्थानमा • तपाईको कम्प्युटर फास्ट बनाउने कि • ३५ दिन सम्म चार्ज गर्न नपर्ने मोबाइल फोन • तातोपानीले मोबाइल चार्ज• सजिलो तरिकाले अनलाइनमानै फोटो इडिट गर्ने कि• सफल दाम्पत्यका लागि सात सेक्स सेक्रेट• रसियामा उल्कापिण्ड खस्दा १२ सय जना घाइते• कुन उमेरमा कस्तो सपना• ब्रेष्टको प्लाष्टिक सर्जरी गराउन एशियाली मुलुकमा कोरिया अगाडी चुटकिलाहरु पढेर
पीपलबोट डटकम- चुनाव संविधानसभा कि संसदको?विश्वको एघारौं शक्तिशाली महिलामा कोरियाली राष्ट्रपति उत्तर कोरियाली विशेषदूतको चीन भ्रमणमाथि अन्तर्राष्ट्रिय नजरकान चलचित्र समारोहमा ऐश्वर्या आफ्नी छोरि आराध्यासंगएनआरएन अमेरिकाद्वारा दुई व्यक्तित्वलाई सम्मान धमिलिएका डोबहरूमा एउटा सङुलो अनुभूतिनेपाली जनसम्पर्क समिति कोरियाको महाधिबेसन जुलाई २८ मा हुने आइ एम 18 मा पुनमको कामुत्तेजक दृश्यले पोर्नस्टार सनि पनि पछि (views: 7383) यस्तो छ ईपिएस कामदारका लागि पुन कोरिया आउन पाउने नियम (views: 6361) कोरियाली बैदेशिक श्रम नितिमा परिर्वतन , १० वर्ष ८ महिना बस्न पाउने (views: 4994) संभोगका लागि केही उपयुक्त आसनहरु (views: 4045) एमटियु र केसिटियुको निरन्तर संघर्षपछी ईपिएस नियममा परिबर्तन (views: 4014) अब कोरियामा सजिलै कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाइने (views: 3829) कोरियामा फेरी एकजना नेपालीले १५ तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरे (views: 3515) pragati rai - 23 May, 2013thank you Hello Nepal Korea.Com !sangam sharma - 21 May, 2013rojgarsangam sharma - 21 May, 2013rojgarsangam sharma - 21 May, 2013rojgar ﻿